Inkqubo yeKhamera yeKhamera esetyenzisiweyo-eGeofumadas
Ikhaya/Okufumaneka/System yekhamera isicelo-Streetview
OkufumanekaGeospatial - GISezintsha
Isixhobo esisetyenziswayo sokujonga izitrato kunye neeNkqubo ziyimveliso yamava eminyaka nenxalenye yabathengi. Ukusuka kumthengi wabo wokuqala ovelisa imidwebo yeekhathuni e-Bogotá, eColombia, bandise abathengi babo kuwo onke amazwekazi omhlaba, banegalelo kwiiprojekthi ezahlukeneyo nakwimizi-mveliso.
Ukusetyenziswa kwezixhobo zayo kubanzi njengoko sinokucinga, kuthathelwa ingqalelo ukuba kancinci kancinci imfuno yeStreetview ikhule ukusombulula iimfuno kunye nokunciphisa iindleko zeeprojekthi ezinkulu. Kule meko, inkampani ekhuthaza ezi mveliso igxile ekuboneleleni ngezixhobo ezipheleleyo kunye neenkqubo zokurekhoda, ukuqhubekeka kunye nokupapashwa kwesisombululo esiphakamileyo se-Streetviews, ngokuzimela ngokupheleleyo kunye nokubhala.
Ungayisebenzisa njani iApplied Streetview?
Ikhamera yesisombululo esiphakamileyo sisiseko esiphambili sezi nkqubo, sinobubanzi bokubamba idatha, ukurekhoda ukuya kwi-7 yemifanekiso yepanoramic ngomzuzwana. Idatha kunye nemethadatha zigcinwa kwikhamera kwimemori ye-SSD etshintshayo, igcina ukuya kuthi ga kwimifanekiso engama-250.000 yemiboniso yesitalato kunye nokufikelela kwiiyure ezili-9 zokubanjwa okuqhubekayo.
Inani leentaba eziguquguqukayo ziyafumaneka kwimveliso nganye yeApplied Streetview. Imigca emithathu yenkqubo yenzelwe ukuphumeza ukubanjwa kwedatha kwiindawo ezahlukeneyo, kunye nokuzimela ngokupheleleyo.
I-Carphone System System
Inkqubo inokuxhunyezwa kuyo nayiphi na imoto imoto okanye isithuthi ukukhawuleza ukudonsa idatha ngeendlela, ezindleleni, ezindleleni zokungcola nokunye.
Ukunyuka kweMagnetic kwiphahla
Ikhamera ye-30 Megapixels
I-Samsung Galaxy Tab ithebhulethi ye-S2 (8 ") njenge-WiFi Remote Control
I-Android Control Remote Control
Imemori yeSSD eguqukayo
Izixhobo ezichanekileyo ze-UV
Umkeli we-GNSS (i-4 GPS enye)
I-Antenna (i-leveling device)
Ibhetri kunye nejaja
Quick-connect connector} I-Bluetooth yebhetri iliso
Ilayisenisi yexesha elilodwa kuMdali, inkqubo yethu yokucwangcisa i-Streetview
Amacwecwe kunye neengxenye zokugcina
Ifakiwe ekuthengeni iKhithi. Le nkqubo isebenza ukuya kuthi ga kwii-Streetviews ezingama-50.000 24 ngeyure ezingama-XNUMX kwaye idale isikhangeli somsebenzi, kunye nethuba lokuhlengahlengisa esi sixhobo sinomdla kwiimfuno zakho.
Isoftware ekhethekileyo yePhotoogrammetry yenza ukuba kube lula ukuyila nokudibanisa izinto kunye ne / okanye amaxabiso, aluncedo kwisikhangeli. Ifotoogram inokusetyenziselwa ukuleyibhelisha izinto, ukuphawula amanqaku anomdla wokuququzelela ukukhangela; ukulinganisa umgama kunye nomphezulu.
Isicelo se-Android sifakwe kwithebhulethi ye-Samsung Galaxy S2 (8 ”) eza nezixhobo. Ulawulo olukude olukuvumela ukuba ulawule kwaye ujonge imisebenzi yekhamera kunye neGPS xa uvelisa ukubonwa kwesitrato.
Ukusetyenziswa kwesitrato esisetyenzisiweyo sisisombululo esipheleleyo malunga noko kufunwa yinkampani
Ukuba umfanekiso uxabisa amagama aliwaka, i-Applied Streetview inokulingana nenoveli yonke. Ukusetyenziswa kwesitrato esibonelelweyo kunika ithuba lokuvelisa kunye nokupapasha ibali lakho kwiidigri ezingama-360, njengesisombululo esipheleleyo, sigcwele ukhetho kwaye sinokulungelelanisa ngeendlela ezahlukeneyo zamashishini, amashishini kunye nokusetyenziswa.
I-Streetlied Streetview ihamba phambili kwimakethe ekhulayo. Izisombululo zabo ziyafumaneka kwihlabathi jikelele, ukuqonda imfuno yamashishini, ukudala umthamo omkhulu weeStratta kwiSombululo esiphezulu, ukugcina ulawulo olupheleleyo kunye nokhuseleko ngamaxesha onke. I-Streetlied Streetview i-shortview, imfutshane, inkqubo elula, elula, epheleleyo neyokuzimela; eyona nto ibhetele ndiyibonile kwimarike.
Akukho mida ekusebenziseni lolu hlobo lweemifanekiso ezisombululo eziphezulu. Oku kubandakanya ingieniería, indawo kunye nebalazwe, kunye neenkcukacha zamanzi ezixhobo ezinkulu, ezifana nemigca yamandla, iipayipi, iintambo ze-fiber optic kunye nezinto ezikhoyo.
I-jewel ye-Applied Streetview nguMdali, le nkqubo inomdla kwaye inomdla wokulungisa iyakwazi ukuphatha ukubonwa kwezitrato ezingama-50,000 ngosuku olunye. Oku kunika isitshixo sokugcina lonke ulawulo lwedatha kunye nemveliso yokugqibela ye-Streetview Navigator, ekuvumela ukuba uthathe isigqibo sokuba uza kubelana nabani, nini, kunye nabani.
Iinqela ezintathu ezisisiseko ze-Applied Streetview, kwi-Automovil, kwi-Backpack ne-Railroad, zihlanganisa ubuninzi beendawo kunye neendawo zokuhlala ezidinga ukuvelisa i-Streetviews. Iinkqubo ezisekelwe kwiifom ezivulekileyo, zifanelekile kumntu oqingqiweyo, kubafundi abaphambili kakhulu. Ngoqeqesho lweiphakheji, ezininzi iimfuno zobuchwepheshe ze-Hardware kunye neSoftware ye-Applied Streetview zigqityiweyo, ziphelisa imfuno yokuphuma ngaphandle kweenkonzo xa kuziwa ekujonganeni nezidingo ekuhambeni komsebenzi.
“Umgangatho ophezulu weembonakalo zethu zeStreetviews unceda ekwenzeni izigqibo ezibalulekileyo mihla le kulo naliphi na ishishini, nokuba kukwazi ubume bendawo engqonge isiza esitsha sokwakha, okanye ukubonisa abathengi okanye abatyali-mali apho sikhoyo. inqaku lomdla ophezulu. Ayikho enye indlela enokwenza oku ngcono kunothotho lwaPhambi, Ngexesha nasemva kokuJonga isitalato. Siye sakha inkqubo yethu sicinga ngomthengi weshishini, sibaxhobisa ngesisombululo sesitshixo sokubanjwa, ukusetyenzwa kunye nokubonisa iStreetviews ngobuninzi. Ukugcina yonke inkqubo yangaphakathi iyakhawuleza, iyaguquguquka kwaye inexabiso eliphantsi, inolawulo lwenkqubo yonke”.
UJan Mantkowski, i-CEO ye-Streetview Technology GmbH
Ukufumana ulwazi oluninzi, sincoma
Luza kujongeka njani ulawulo lomhlaba kwixesha elizayo? - umbono weCadastre 2034